Idgwọ, Ego na Nweta Media: Nkọwa, Ndị na-ege ntị na atụmatụ | Martech Zone
Nkwalite ọdịnaya dabere na ntanetị atọ 3 - mgbasa ozi akwụ ụgwọ, mgbasa ozi enwere na mgbasa ozi akwụpụtara.
Agbanyeghị na ụdị mgbasa ozi ndị a abụghị ihe ọhụụ, ọ bụ ama ama na ịbịakwute mgbasa ozi ndị nwere ma nweta nke gbanwere, na-agbagha usoro mgbasa ozi ọdịnala. Pamela Bustard, Mgbasa Ozi Media
Nkọwa, Owngwọ, Nwepụta ma Mụta Mgbasa Ozi
Dabere na Media Octopus, nkọwa ndị a bụ:
Mediagwọ Media - Ihe ọ bụla a kwụrụ iji kwụọ ụgwọ maka ihe mgbasa ozi nwere; ị na-akwụ ụgwọ iji bulie ikpughe gị site na ọwa.
Nwepu Media - Ọwa nkwukọrịta ọ bụla ma ọ bụ ikpo okwu nke ika gị nke ị mepụtara ma nwee ike ịchịkwa ya.
Mgbasa Ozi - Mgbe ndị mmadụ na-ekwu maka ma kesaa akara gị na ngwaahịa gị, ma ọ bụ nzaghachi maka ọdịnaya ịkekọrịtara ma ọ bụ site na ntinye aka. Ọ bụ mgbasa ozi n'efu nke ndị agbapụtara.
Aga m agbakwunye na usoro a na-apụtakarị. Anyị na-apụkarị mgbasa ozi mgbasa ozi akwụgoro site na ịnweta nkesa oke site na akụrụngwa akwụ ụgwọ. Na akwụ ụgwọ mgbasa ozi isi mmalite webata ọdịnaya, mana ọzọ nwere mgbasa ozi isi mmalite bulie ya na irite ọtụtụ ndị ọzọ na-ekwu okwu site na ntanetị mmekọrịta.
Tags: akwụ ụgwọ mgbasa oziakwụ ụgwọ nkọwanwere mgbasa ozinwere nkọwa mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa oziakwụ ụgwọ nkọwapụta mgbasa oziakwụ ụgwọ akwụ ụgwọ
WiFi na Cgbọ ala? Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Autolọ Ọrụ Na-aghọtaghị M
Elele nke nnukwu ọnye ahịa ịre ahịa ahịa